AOC Curved Gaming Monitor CQ27G2 ~ ICT.com.mm
HomeAOC Curved Gaming Monitor CQ27G2
Panel: 27″ (VA / 1500R) Pixel Pitch (mm): 0.2331 (H) x 0.2331 (V) Brightness (typical): 250 cd/m² Contrast Ratio: 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) Response Time: 1ms (MPRT)... [Learn more]
Panel: 27″ (VA / 1500R)
Optimum Resolution: 2560 x 1440 @ 144Hz – DisplayPort 1.2
HDCP Version: HDMI: 2.2
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 27″ ရှိတဲ့ AOC Curved Gaming Monitor (CQ27G2) ဖြစ်ပါတယ်။ (VA / 1500R) Panel အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကွေးညွတ်ထားတဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ အမြင့်ဆုံး Resolution - 2560 x 1440 အထိရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲက လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြသပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဂိမ်းထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှအပေါ်မူတည်ပြီး လျင်မြန်မှန်ကန်တဲ့ အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Monitor ကို ဆုံလည်ပြုလုပ်ထားပြီး အနိမ့်အမြင့် စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်သလို မျက်နှာပြင် အတိမ်းအစောင်းကိုလည်း လိုသလို ပြုပြင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ မိမိစိတ်ကြိုက် အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းအနေအထားနဲ့အတူ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ အနေအထားကို ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် အသုံးပြုသူရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံး မြင့်တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ရဲ့ VA panel ဟာ Monitor ရဲ့အရောင်အနေအထားကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းမှာ ထိန်းထားပေးပြီး မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောင့်နဲ့အတူ သက်ရှိပုံရိပ်အလား ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။ Signal Input ပိုင်းအတွက် HDMI 2.0 Port နှစ်ခုနဲ့ DisplayPort 1.2 တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမိုက်စားဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Curved Gaming Monitor ဖြစ်ပါတယ်။
It'savery great monitor. I've been looking for it …
It'savery great monitor. I've been looking for it in local market , but can't find until I found it at ict.com. thanks
144Hz, 1ms response rate and curved is fantastic.